Malahelo na mangoraka olona iray ianao, rehefa miombom-pihetseham-po aminy ary miezaka mipetraka eo amin’ny toerany. ‘Mbola kely isika dia efa manana an’io toetra io’, hoy ny Pr. Rick Hanson, manam-pahaizana momba ny aretin-tsaina.
ERITRERETO IZAO: Isika olombelona ihany no mahay mangoraka, amin’ny zavaboary eto an-tany. Nahoana? Milaza ny Baiboly hoe noforonin’Andriamanitra araka ny endriny isika. (Genesisy 1:26) Afaka manana toetra tsara hoatr’azy àry isika. Andriamanitra be fangoraham-po i Jehovah. Manahaka azy isika rehefa mangoraka ny hafa ka manampy azy ireny.—Ohabolana 14:31.
Mangoraka antsika Andriamanitra, ary tsy tiany ny mahita antsika mijaly. Nijaly be ny Israelita fahiny tamin’izy ireo andevo tany Ejipta. Tsy maintsy nirenireny nandritra ny 40 taona tany an-tany efitra koa izy ireo avy eo. Nanao ahoana ny fihetseham-pon’Andriamanitra tamin’izay? Hoy ny Isaia 63:9: “Ory izy nandritra ny fahoriana rehetra nanjo an’ireo.” Tsy hoe nahafantatra an’izay nanjo azy ireo fotsiny Andriamanitra, fa tsapany mihitsy ny fijalian’izy ireo. Izao no nolazainy ao amin’ny Zakaria 2:8: “Izay mikasika anareo dia mikasika ny anakandriamasoko.” Malahelo izy rehefa misy olona mampijaly antsika.
Mety hanamelo-tena isika indraindray, ary hieritreritra hoe tsy mendrika ny hanehoan’Andriamanitra fangoraham-po. Manome toky antsika anefa ny Baiboly hoe: “Lehibe noho ny fontsika ... Andriamanitra, sady mahalala ny zava-drehetra.” (1 Jaona 3:19, 20) Mahafantatra tsara antsika izy, ary na isika aza tsy mahafantatra ny tenantsika hoatr’azy. Fantany tsara ny eritreritsika sy ny fihetseham-pontsika ary ny zavatra iainantsika. Mangoraka antsika koa izy.
Vonona hanampy an’izay ory Andriamanitra. Afaka matoky àry isika hoe hampionona sy hanampy ary hanome fahendrena antsika izy
“Raha miantso ianao, dia hamaly anao i Jehovah. Ary raha miantso vonjy ianao, dia hilaza izy hoe: ‘Intỳ aho!’”—ISAIA 58:9.
“‘Fa fantatro tsara ny zavatra efa noeritreretiko hatao aminareo’, hoy i Jehovah. ‘Mieritreritra ny hanome anareo fiadanana aho fa tsy loza, mba hahatonga anareo hanana ny hoavinareo sy hanana fanantenana. Dia hiantso ahy ianareo ka ho avy hivavaka amiko, ary hihaino anareo aho.’”—JEREMIA 29:11, 12.
“Ataovy ao anaty sininao ny ranomasoko. Tsy voasoratra ao anaty bokinao ve ireny?”—SALAMO 56:8.
MIJERY ANTSIKA IZY, MAHAFANTATRA NY MANJO ANTSIKA, ARY MALAHELO ANTSIKA
Ho vitan’ny olona iray ny hiatrika olana, raha fantany hoe mangoraka azy Andriamanitra. Hoatr’izany i Maria. Hoy izy:
“Matin’ny kansera ny zanako lahy tamin’izy 18 taona, rehefa avy niady mafy tamin’ilay aretina nandritra ny roa taona. Nalahelo be mihitsy aho, dia hozy aho hoe tena tsy rariny ilay izy. Tezitra tamin’i Jehovah aho satria hoatran’ny tsy nanao na inona na inona izy. Tsy nositraniny ny zanako!
“Nisy namako mpiara-mivavaka aminay niresaka tamiko, enin-taona tatỳ aoriana. Namboraka ny fihetseham-poko aho, dia nolazaiko taminy hoe tsy tia an’ahy i Jehovah. Nihaino tsara an’ahy izy, ary tsy notapahiny mihitsy ny teniko, na dia ela be aza aho no niteny teo foana. Avy eo izy nanonona ny 1 Jaona 3:19, 20 hoe: ‘Lehibe noho ny fontsika ... Andriamanitra, sady mahalala ny zava-drehetra.’ Nohazavainy tamiko hoe mahatakatra tsara ny fahoriantsika i Jehovah. Tena nanohina ny foko ilay andinin-teny.
“Mbola tezitra tamin’i Jehovah foana anefa aho. Tatỳ aoriana aho namaky an’ilay Salamo 94:19 hoe: ‘Rehefa nihabetsaka ny tebiteby tato anatiko, dia ny fampiononanao no nanafosafo ahy.’ Hoatran’ny hoe natao ho an’ahy mihitsy ilay andininy! Lasa tony kokoa aho tatỳ aoriana, rehefa noresahiko tamin’i Jehovah ny fahoriako. Fantatro mantsy hoe mihaino an’ahy izy sady mahazo tsara ny manjo ahy.”
Tsy faly ve ianao mahalala hoe mahazo tsara an’izay manjo anao Andriamanitra sady malahelo anao? Nahoana anefa no be dia be ny olona mijaly? Sazy avy amin’Andriamanitra ve izany? Mba hanao zavatra ihany ve Andriamanitra, ka hanafoana ny fijaliana? Hiresaka an’izany ny lahatsoratra manaraka.
Tsy mampiasa aretina na loza na zavatra hafa Andriamanitra, mba hanasaziana olona noho ny fahotany.
Hizara Hizara Mba Malahelo Anao ve Izy?
Fiaraha-miory—Manampy ho Tsara Fanahy sy Hangoraka